ရွှေဘိုသား: October 2007
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Sunday, October 28, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ ဓာတ်ပုံ / Comments: (0)
ဂျာမနီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်ရပါတယ်။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (3)
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Friday, October 26, 2007 / / Comments: (4)
ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျနော့အတွက်တော့ အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ အချက်လေး တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဘာလဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့လူတော်တွေ အရမ်းပေါတယ်ဆိုတာပါ။ ဒါဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့ အချက်လို့ပြောလို့ ရသလို အဲဒီ အချက်ကြောင့်များ ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာ တော်လှန်ရေးသက် ကြာနေသလား ဆိုတဲ့ လူပိန်းအတွေး အခေါ်မျိုးလေး ဝင်လာမိပါတယ်။ ကျနော့မှာ ကိုးကားဖို့စာအုပ်စာတမ်း မလုံလောက်တဲ့ အတွက် သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ မှားယွင်းနေ မယ်ဆိုရင်လဲ ထောက်ပြအကြံပေး ကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
လောလောဆယ် အာဏာရှင် အားပေးအာမြောက်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ရုရှားပြည်ထောင်စု ဆိုတာပေါ်ထွက်လာ ဖို့ပဒေသရာဇ်အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရတော်လှန်ရေး ပါ။ ပထမဦးဆုံး လက်ဝဲစနစ်ကို စာရွက်ပေါ်ကနေ အပြင်ကို ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေး လဲဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ တပ်မတော်သား တွေ ပါဝင်တဲ့ တော်လှန်ရေးကြီး ကိုပြန်ကြည့်ရင် ကွန်မြူနစ်ပါတီ တစ်ခုထဲကနေ အဓိက ဦးဆောင်မှုပေးသွားတာကို တွေ့ ရပါ တယ်။ ၁၉၁၂ မှာ ဒီမိုကရက်တစ်အလုပ်သမားပါတီ ရဲ့ အဖွဲ့ ခွဲတစ်ခုအနေ နဲ့ ဖွဲ့ စည်းခဲ့ တဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီ တစ်ခုထဲရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာပဲ ရုရှပြည်ရဲ့ ပဒေသရာဇ်အာဏာရှင် စနစ် ကို အပြီးသတ်တွန်းဖြိုနိုင်ခဲ့တယ်။ရုရှပြည်တွင်းတော်လှန်ရေး စတင်ချိန်မှာ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံနေရ တဲ့ ခေါင်းဆောင်အများစု က ပြည်တွင်းကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီး တော်လှန်ရေး ကို အနားသတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၉၀ လောက်ကတည်းက အခြေတည်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေး မှာ အကွဲအပြဲ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆိုတာပြောမကုန်နိုင်လောက်အောင် များခဲ့ပါတယ်။ အထင်ကရ အားဖြင့်တော့ ဘော်ရှိဗစ် နဲ့မင်ရှိဗစ် အကွဲအပြဲပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲရင့်မဲ့ ချိန်မှာ ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တစ်ခုထဲရဲ့ အောက်မှာ အောင်လံလွင်ထူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မော် နဲ့ ချန်ကေရှိတ်
နောက်ထပ်အာဏာရှင် အာပေးအားမြောက်နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပြည်ကြီး ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်အရင်းရှင်တွေ နဲ့ပဒေသရာဇ်အာဏာရှင်လက်အောက် က ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားနေ တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကြားထဲက အကွဲအပြဲပါ။ ချန်ကေရှိတ်ခေါင်းဆောင် တဲ့ ကူမင်တန်ပါတီ နဲ့မော်စီတုန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီ တို့ ရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပါ။ ကူမင်တန်ပါတီ ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင် ကွယ်လွန်တဲ့ ၁၉၂၅ မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ တဲ့ သဘောထားကွဲလွဲ မှုတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကွန်မြူနစ်နဲ့ကူမင်တန် နှစ်ပါတီဟာ ၁၉၃၇ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို ခုခံတဲ့စစ်ပွဲ မှာ တော့ယာယီမဟာမိတ် အနေနဲ့ အတူတူ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးတော့ မှ အချင်းချင်း ပြန်တိုက်ကြခိုက် ကြ ပေါ့။ ဒါဟာ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဦးတည်ချက်တူပြီး လမ်းကြောင်းကွဲတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းနှစ်ခု ကြားမှာ ကာလတစ်ခု အထိ ညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သာဓကပါ။
ကျနော်တိုနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့အချိန်မှာ ဖ.ဆ.ပ.လ အဖွဲ့ ကြီး ဟာ အင်အား တောင့်တင်း တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု အဖြစ်ဆက်လပ်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာ ပဲ ဆိုရှယ်လစ်အင်အားစု နဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစု တွေအဖြစ် သန့် ရှင်း၊ တည်မြဲ ဆိုတဲ့နာမည် သစ်တွေနဲ့ ထပ်ကွဲကြပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါ အကွဲအပြဲကတော့ ဘယ်လိုမှ ရင်ကြားပြန်စေ့လို့မရတဲ့ အပြင့် စစ်တပ်ကို အာဏာရဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းဘူးသွားအောင် သင်ကြားပေးလိုက် တဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါက အာဏာရပါတီမှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ အတိုက်အခံ ပါတီတွေမှာလဲ အကွဲအပြဲတွေ အများကြီးပါပဲ။ ကွန်မြူနစ်ပါတီခြင်းတူတူ မှာပဲ မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ရယ်၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီမြန်မာပြည်ရယ် ဆိုပြီး ကွဲတဲ့ အကွဲအပြဲတွေ လဲ ရှိပါတယ်။ တပ်ပေါင်းစုညီညွတ်ရေး တို့ ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ရင်ခြင်းကပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာလဲ အတိုက်အခံနဲ့အာဏာရပါတီကြားမှာရော၊ အတိုက်အခိုင် အချင်းချင်း ကြားမှာပါ အကြိမ်ပေါင်း များစွာကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ခါမှလဲ အလုံးစုံ ညီညွတ်ရေးကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံး တော့ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေ မှာ စစ်အာဏာရှင်ကို နေရာပေးလိုက်ရတာပဲ။
ဒီကာလမှာလဲ ကျောင်းသားလိုင်းက ဦးဆောင်တဲ့ တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ မှာ7July၊ ၁၉၇၄ မှာ ဦးသန့်၊ ၁၉ရ၆ မှာ မှိုင်းရာပြည့်။ စတဲ့အထင်ကရ တိုက်ပွဲ များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာလဲ တပ်ဦး ရယ်၊ တပ်ဦးသစ်ရယ် ဆိုပြီးခေါင်းဆောင်မှု တစ်ခု ထက်ပို များခဲ့တာကို တွေ့ ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ၁၉၈၈ မှတော့ တော်လှန်ရေးဟာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းထဲမှာတင် ရပ်မနေတော့ပဲတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အထိပျံ့ နှံ့ သွား ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂-၁၉၈၈ အရေးအခင်းတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မှုသွေးကွဲ တာမျိုးမရှိပေမဲ့ သွေးစည်းတာမျိုးကို အားရလောက်အောင် မတွေ့ ခဲ့ရပါဘူး။
စစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်း ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ၁၉၉၀ ကံဆောင်တိုက်ပွဲ များ၊ ၁၉၉၁-၉၂ အခြေခံပညာကျောင်းတိုက်ပွဲ များ၊ ၁၉၉၆ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတိုက်ပွဲ၊ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ တိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ပါတယ်။နောက်ဆုံး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ မှာတော့ သံဃာထုဦးဆောင်တဲ့ လူထုတိုက်ပွဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲ အဖြေတွေကတော့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီကလာရဲ့ ရှေ့ ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေ သွေးတိုးအားလျော့တာ မျှော့်လင့်ထားသလောက် မအောင်မြင်နိုင်ခဲ့တာ လူထုအဆင်သင့် မဖြစ်သေးလို့ လို့ ပြောဆိုလို့ ရပေမဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇ တိုက်ပွဲ ကတော့ ကျနော်တို့ အဲဒီ လိုအမြင်နဲ့ ကြည့်လို့ မရဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သံဃာ၊လူထု၊ကျောင်းသား အကုန်ပါပါရက်သား နဲ့ ခုလို ပွဲအီသွားရတာ၊ ဝန်ထမ်းသပိတ် ထိ ဆွဲခေါ်မသွားနိုင်တာတော့ ဆန်းစစ်ဖို့ လို မယ်ထင် ပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ တကယ်အနာခံအားထုတ် သွားတာကတော့ ၈၈မျိုးဆက် ဆိုတာ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ ငြင်းဆန်လို့ မရပါဘူး။ သူတို့ အများစု အထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အချိန်၊ အပြင်မှာ ကျန်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလဲ မြေအောက်လျှိုးနေတဲ့ အချိန်မှာ ခေါင်းဆောင် အဆက်ပြတ်မှုပြဿနာ နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ရတာ ကလည်းအဓိက အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ပါ ဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ သာမန်လူတွေ မသိနိုင်တဲ့ မြေအောက်ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိကောင်းရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲ ကြောင့်ပဲ မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ကမ္ဘာက အာရုဏ်ထား လာစေတာပါ။ နောက်တစ်ချက် ကတော့ ကျနော်တိုင်ပြည်မှာ နိုင်ငံရေးကို စိတ်လဲမဝင်စားတဲ့ လူတန်းစား၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ အချိန်မတတ်နိုင်တဲ့ အခြေခံလူတန်းစာတွေ ရဲ့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ စိတ်ကို လှုပ်နှိုးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ပကတိရုပ်ကိုလဲ လှစ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဘက်မှာ အရည်အချင်းပြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီးကို ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတိုက်ပွဲ က ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာတာ ဖြစ်လို့ အချက်ကျကျလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အဆင်သင့် ရေးဆွဲထားတဲ့ စီမံကိန်း အသင့်ရှိမနေတာ လို့ ထင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်အနေနဲ့ ကလဲ သူတို့ ရပ်တည်မှုကို အကြမ်းဖက်သမား ဆန်ဆန်ကျင့်သုံးခဲ့တာ ကလဲ အကြောင်းတစ်ချက် အနေနဲ့ ပါမှာပါ။ ခုလိုတိုက်ပွဲ အီသွားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ ရတဲ့အခွင့်အရေး ကို အသုံးချပြီး ဘယ်လို ဆက်သွားမယ် ဆိုတာတွေးနေမှာသေချာပါတယ်။
ရုရှားတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တာ တခြားအချက်တွေ အများကြီးရှိနိုင်ပေမဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုတစ် ခုထဲအောက်မှာ ရှိတာက အရေးပါတဲ့ နေရာတစ်ခုက ပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်ပြည် ဂျပန်အောက် မကျတာလဲ ဆန့် ကျင်ဘက်ပါတီနှစ်ခု ညီညွတ်ခြင်းဟာ အရေးတော်တော်ပါခဲ့ မယ်လို့ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရတာလဲ ဗမာထွက်ရပ်ဂိုဏ်အဓိကနေရာ ကပါ ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီနေ့ အခြေအနေ မှာ နအဖ ကို ဆန့် ကျင်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ အများ ကြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ အများကြီး။ ပြီးတော့ ဒီအဖွဲ့ အစည်း တွေ အားလုံရဲ့ဘုံရည်ရွယ်ချက် ကလည်း စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချဖို့ ဆိုတာလဲသေချာတယ်။ ဘယ်သူမှ လဲ ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်းကို ပါတီအာဏာရဖို့လုပ်ကိုင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာတယ်။ အဲဒီတော့တပ်ပေါင်းစု ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ဆိုတာ ကျနော်တို့ အတွက်ဘာမှ အခက်အခဲမရှိဘူး ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မှာ အန်တီစုရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ မှာ ၈၈ မျိုးဆက်ရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ မှာ လူဘောင်သစ်ရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ မှာ ကျောင်းသား တပ်မတော်ရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ မှာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ တွေရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ မှာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အဖွဲအစည်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ကို ဝန်းရံပေးမဲ့ လူထု ရှိတယ်။ ကျနော်တို့အတွက်လိုအပ်နေတာ အင်အာရှိတဲ့ အသေးတွေပေါင်းပြီး ကြီးမားတဲ့ အင်အားတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ရမယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကို အမြစ်ကနေလှဲဖြိုပစ်မယ်။ အဲဒီနောက် တော့ စိတ်ရှိရင် ဖက်ဒရယ်မြေပြင်မှာ ရောင်စုံပန်းတွေ အပြိုင်အဆိုင်ပွင့်ကြတာပေါ့။ လောလောဆယ် တော့ တစ်သွေးတစ်သံတစ်မိန့် ။ ကျနော်ကတော့ လူပြိန်းလိုပဲတွေးတတ် တယ်ဗျာ။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Thursday, October 25, 2007 / / Comments: (4)
တကယ်တော့ အကြာကြီး ကြာခဲ့ပါပြီ။ တချို့ လူကြီးတွေက ကံကိုပဲ လက်ညှိးထိုးကြမယ်။ တချို့ တွေက မိုးကောင်းတုန်းရွာပေါ့ဆိုပြီး အံတကြိတ်ကြိတ် ရှိကြမယ်။တချို့ ကလဲ တိုက်ယူမှ ရမယ်ဆိုတာမျိုး။ တချို့ ကလဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နဲ့ ။ တချို့ ကလဲ အဝေးကနေ ကြိုးစားပြီး နေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမျော်လင့်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြပါသလဲ။ ပညာတတ်တွေ ပညတ်ထားတဲ့ ဝါဒတွေလား။ ကျွန်တော်တို့အများစုကတော့ မေးခွန်းတွေလဲ မသိ၊ အဖြေလဲ မရှိ။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အများစုကတော့ ကိုယ့်ဆန်အိုးလေး တဆဆ လုပ်လို့ ပေါ့။
ဓမန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ အများကြီးမပြောရဲပါဘူး။ သေချာတာက ကံဆိုတာ ဒီတိုင်းတော့ ဖြစ်မလာပါ။ ကံကငါးဖြစ်မယ်ဆိုရင် အလုပ်ဆိုတဲ့ ငါးမျှားချိတ်နဲ့ကူမှ ဟင်းစားရ နိုင်မှာပါ။
၈တန်း ၉တန်း လောက်က အမေပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်လေး(Dictionary) မတတ်တတတ် ကိုင်ပြီး တောင်အမေရိက တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ချေဂွေဗါးရားရေးတဲ့ ပျောက်ကျားးစစ်ပွဲ (Ernesto Che Guevara’s Guerrilla Warfare) စာအုပ်လေး ဖတ်ပြီး အိပ်မက်ထဲ တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာတတ်ဆန်တဲ့ တွေဝေခြင်း ပဲလား။ ကြောက်လန့်ခြင်းကြောင့်လား။ အသက်ကြီးလာလေလေ အတွေးအခေါ်တွေ ပြောင်းလဲလာလေလေ ဆိုတာတော့ ၀န်ခံချင်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ မှာ လက်နက်ရှိရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ ကျောရိုးနယ်မြေ (Arm Area) ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မှာ လတ်ဆတ်တဲ့ ကျောရိုးနယ်မြေ ရှာမတွေ့ ပါ။ စီးပွားရေး လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား နယ်မြေရယ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ယမ်းငွေ့ တွေလွှမ်း နေတဲ့ နယ်မြေတွေပဲ ရှိခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ခပ်ငယ်ငယ် ကရင်ပြည်နယ် ကို ရောက်တုန်းက KNU နဲ့စစ်တပ် ဘယ်သူက ပိုကောင်းလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ဒေသခံ အများစုရဲ့ အဖြေက ဘယ်သူမှ မကောင်းဘူး အတူတူပဲတဲ့။ကျွန်တော်တို့သာမန်လူအများစုအတွက် ဒီမိုကရေစီ၊ ကွန်မြူနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ဖက်ဒရယ် ဆိုတာထက် ဘယ်စနစ်နဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်းချမ်းစွာ
နဲ့ လူ ပီပီသသ နေထိုင်နိုင်ရေး ပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်း က လူမျိုးခြား ဂျပန်တွေကိုတောင် တော်လှန်ရေး ကာလထဲမှာ လူလူချင်း အသတ်ခံရ မှာစိုးတဲ့ စိတ်သက်သက်နဲ့ ပဲ ဖွက်ပေးထားတဲ့ အဖြစ်တွေ အများကြီးပါ။ လူလူချင်း မပြောနဲ့သတ္တ၀ါလေးတွေကိုတောင် အကြောင်းမဲ့ သက်သက် သတ်ဖြတ်တတ်တဲ့ လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ န.အ.ဖ နဲ့ဖက်ဆစ် ရဲ့ ဆိုးဝါးမှုရေချိန် က သိပ်မကွာလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ န.အ.ဖ ရဲ့အမျိုးအဆွေတွေကတော့ လူထုထဲ မှာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန် ဖို့ဆိုတာ အကျိုးထက် အပြစ်ကများမယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
ရဲဘော်သုံးကျိတ်က ဂျပန်အကူအညီနဲ့အင်္ဂလိပ်ကို မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်က ဘာလို့ ကူညီခဲ့လဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲသိပြီးသား ပါပဲ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ကို ဘယ်သူက ကူညီနိုင်မှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ ကျွန်းသစ်တို့ ၊ ကျောက်သံပတ္တမြား တို့ဆိုတာကလဲ အမြင်သစ်ခေတ် (Ideologies Age) မှာ တော်တော် ပျင်းဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ စစ်အေးတိုက်ပွဲ(Cool War) ကာလ က လက်ဝဲလက်ယာ ဩဇာ ပြိုင်မှုကလဲ အဆုံးသတ် ခဲ့တာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကို စာနာနိုင်မဲ့ တစ်ခုသော အကြောင်းတရား ကတော့ လူ့ အခွင့်ရေး (Human Right) ဆိုတဲ့ ရှုထောင့်တစ်ခု ပဲရှိ တာပါ။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ မှု တစ်မျိုးတည်း နဲ့ တော့ လူ့ အခွင့်ရေး ကိုယူပေး နိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေး အဆက်အသွယ် မရှိတဲ့ အတွက် အကြွေးပေးရတာတောင် သက်သာနိုင် ပါသေးတယ်။ ဒါက ကုန်သွယ်ရေး အပိုင်းပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု အပိုင်းမှာ လည်း စက်ရုံတစ်ရုံ ဆောက်ဖို့ ဆိုတာ မြေနေရာ၊ လူအရင်း အမြစ်၊ စက်ပစ္စည်း တွေ ရှိတိုင်း မရပါဘူး။ အခွန် ကိစ္စ (Taxing) ၊ စွမ်းအားအရင်း အမြစ် (Power Source) ၊ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်မှု ကာလ (Nationalization Period) တွေနဲ့အခြား လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ရှိနိုင် ပါတယ်။ ဒီလိုအပ်ချက်တွေ မပြည့် စုံ ခြင်းကတော့ န.အ.ဖ ရဲ. တာဝန် လုံးလုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးပွားရေး ပိတ်စို့ တဲ့ ဒဏ်ကို တကယ်တန်း အလူးအလဲ ခံရတာက စင်ကာပူ၊ ထိုင်း တို့ လို နိုင်ငံ တွေနဲ့အလှမ်းဝေးလွန်းတဲ့ လက်လုပ်လက်စား တွေပါ။ မီးစက်ရှိတဲ့ လူတွေ အတွက်တော့ ဘယ်နားရောက်ရောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှာ မဟာမိတ်တပ်ပေါင်း စုက လက်နက်ကိုင်တပ် သုံးပြီး ပြဿနာတွေ ရှင်းပေး လေ့ရှိပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ဒီနေခေတ်လူ့အဖွဲအစည်း ရဲ့ ကျောရိုးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ရေနံဟာ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း မှာ အမြောက်အများ ထွက်ရှိနေတာပါ။ နောက်တချက်က အရှေ့ အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ၊ အယူဝါဒ နဲ့လူမှုရေးစနစ်တွေ က အရမ်း မကွာလှဘူး ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သာ ဘင်လာဒင် (Bin Laden) လို ဆဒန်ဟူစိန် (Saddam Hussein) လို အစွန်းရောက် တစ်ဦး ရဲ့နောက်လိုက်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်သွား ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ထိန်းမရ သိမ်းမရ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ လက်ဘနွန်(Lebanon) နဲ့အစ္စရေး (Israel) တို့ ရဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း များစွာကြာတဲ့ ပြဿနာကိုတော့ ဘာကြောင့် ထိထိရောက်ရောက် မကိုင်တွယ်ရသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့သည်းလွန်စ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံ မှာ ဘယ်လို အစိုးရ အုပ်ချုပ်ပါစေ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေရဲ့ အကြိုစီးပွား ပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ ပြဌာန်း နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ တချို့ နိုင်ငံတွေ အတွက်ဆို ဒီအခြေအနေ ကိုက နိုင်ဖဲကို ကိုင်ထားခွင့် ရနေသလိုပါပဲ။ ကိုယ့် အိမ်လေး ကို ဆေးသုတ်ချင် ရင်တော့အိမ်ထဲ ကို အရင်ရောက် နေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အဝေးကနေ တော့ စုပ်တံကိုင် ဖို့ မလုပ်သင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။
အမှတ်မမှား ရင် ၁၉၉၇ လောက်က အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုမှာ ဂယက်ရိုက်ခတ်ဖူးတဲ့ ကဗျာစာသားလေး တစ်ကြောင်းပါ။ လူ့ အခွင့်ရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လူကောင်းရော လူဆိုးပါ ပါဝင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဆိုးတဲ့သူ မို့ လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ကတော့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို ပျက်ရယ်ပြုရာ ရောက်မယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံမှာ ခြစားနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း က လူတွေကိုလဲ မျက်ကွယ်ပြုဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ကောင်း သထက်ကောင်း အောင်နေပြ ပြီး အရှက်တရား နဲ့ သိမ်းသွင်း ယူရမယ်။ အတ္တမကင်းနိုင် အမှားမလွတ် နိုင်တဲ့ လူတွေဆိုတာ သိပြီး သီးခံနိုင် ရမယ်။ နတ်ကောင်း များကလဲ ကိုယ်ခံအား ကောင်းဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ အမြင်မတူ တဲ့ သူ တွေကို ရအောင် စည်းရုံးခြင်း လို့ဖတ်ဖူး ပါတယ်။
ဘာလို့ လွတ်လပ်ရေး ရတာလဲ
တိုက်ယူတာ သက်သက်နဲ့ရခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေး တော့ မဟုတ်ပါ ဘူး။ တော်လှန်ရေး ဆိုတာသွေး စက်တွေနဲ့ချည်းပဲတော့ မအောင်မြင် နိုင်ပါဘူး။ သခင် အောင်ဆန်း တို့ ရဲ့အမျှော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ညှိနှိုင်းရေး (Negotiation) ဟာ အဓိကနေရာ က ပါမယ် လို့ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဟာလဲ စည်းတွေဘောင်တွေ သိတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီနေ့အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် န.အ.ဖ စော်ကားသလို စော်ကားခဲ့ တာပါဘဲ။ ဖတ်ထားပြီး မှတ်မိတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ ဂျပန်တော်လှန်ရေး ကာလမှာ အင်္ဂလိပ် စစ်ဌာနချုပ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတွက်ရေးတဲ့ စာရဲ့ ခေါင်းစည်း က ကိုယ့်ဘာသာကို ပေးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း General Aung San (Self Style) ဆိုတာနဲ့စပါတယ်။ အဲဒီလောက် စော်ကား နှိမ်ချတဲ့ အင်္ဂလိပ် အစိုးရ ကိုပဲ သခင်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ က မရရအောင် ညှိနှိုင်း ပြီး လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး ကို ရအောင်ယူခဲ့ တာပါ။ သခင်အောင်ဆန်း တို့ လည်း အလွယ်တကူ ညှိနှိုင်း လို့ရ ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ညှိနှိုင်း ရတယ် ဆိုတာကို က ခံစားချက် မတူ၊ အမြင်မတူလို့ဆိုတာကိုလဲ မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ညှိနှိုင်းတဲ့ အခါမှာလည်း လက်ရှိ အသာစီး ရထားတဲ့ သူ ကတော့ အပေါ်စီးက တောင်းဆိုမှုတွေ ကိုလုပ် မှာလည်း အသေအချာ ပါဘဲ။ အင်္ဂလိပ် ကိုယ်တိုင်လည်း မစားရတဲ့ အမဲ သဲနဲ့ ပက် ခဲ့တာ ပါဘဲ။ ဖက်ဒရယ် (Federal) ကိစ္စ၊ ဖ.ဆ.ပ.လ ထဲက အဖွဲ့တစ်ချို့ ကို ထုတ်ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စ လို မျိုး ပါ။ အဲဒီ ဂယက်တွေ က ဒီနေ့အထိ ဖြေရှင်းလို့မပြီးသေးတဲ့ ပြဿနာတွေ ပါ။ အင်္ဂလိပ် တွေမှာ ပြန်စရာမြေ ရှိတာတောင် ညစ်ကျယ်ကျယ် ကလေး အလုပ် လုပ်သွား ခဲ့တာပါ။ န.အ.ဖ မှာက ပြေးစရာမြေ မရှိ ပါဘူး။ ပြီးတော့ လူဆန်တဲ့ အတ္တ နဲ့ လက်ရှိ အာဏာ ကို အသည်းအသန် ကာကွယ် ဖို့ကြိုးစား မှာလဲသေချာ ပါတယ်။ တိုင်းရေးပြည်ရေး ဆိုတာက တခါတလေ မှာ အကုန်မရရင် ဘာမှ မယူဘူ ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး မထားသင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘာမှာ မရှိတာထက် စာရင် ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့ အစလေး ဆွဲထုတ် ပြီးရနိုင်သလောက်ကြိုးစား ကြည့်ဖို့ ကောင်း တယ်လို့ ရိုးရိုးသားသား တွေးမိပါတယ်။ သခင်အောင်ဆန်း နဲ့ခေါင်းဆောင်များ က ကိုယ့်စည်းရုံးရေး အစွမ်းကို ယုံကြည်မှု ရှိရှိနဲ့အင်္ဂလိပ် ရဲ့မသန့် စင်တဲ့ ညှိနှိုင်းမှု အောက်က လွတ်လပ်ရေး ကိုရယူပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ် ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ မှာလဲ ညှိနှိုင်းရေး (Negotiation) စွမ်းရည် အပြည့် ရှိမယ် ဆိုတာလဲ ယုံကြည်နေ ပါတယ်။
ဒီစာတမ်း ရဲ့ သမိုင်းရေး ဆိုင်ရာအချက် တွေက မှားယွင်းမှုရှိ နေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က မြန်မာစာအုပ် တွေနဲ့ ဝေးရာ မှာရောက်နေပါတယ်။ အန်ကယ် ဦးဝင်းတင်၊ အန်တီ စု၊ ကိုပေါ် နဲ့ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူ တို့ ကို လေးစား ချစ်ခင်ပြီး (ဒေါက်တာ) ဇာနည်၊ (ကို) အေးလွင် တို့ ကို စိတ်ကုန် ဆန့် ကျင် နေယုံ ကလွဲပြီး နိုင်ငံရေး အရ ကျွန်တော်က သမိုင်း၊ အရည်အချင်း၊ သတ္တိ ဘာတစ်ခုမှရှိ တဲ့ကောင် မဟုတ်ပါဘူး။ အေးရာအေးကြောင်း ခွေးလေးတွေ မွေးဖို့ ၊ ကျွန်တော်က ချစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ဘ၀ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တစ်သက်လုံး နေထိုင် ဖြတ်သန်းသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ တကယ့်ကို သာမန် လူတစ်ယောက်ပါ။
နှစ်ဖက် အကြိတ်အနယ် ကစားရတဲ့ဘောလုံးပွဲ တွေမှာ အချိန်တန်လို့အနိုင်အရှုံး မပေါ်ရင် ပင်နယ်တီ စနစ်နဲ့အဆုံး သတ်လေ့ရှိ ပါတယ်။ ပွဲချိန် သိပ်ကြာနေရင် နေ့ လည် ဘက်ဆို ပရိတ်သတ် နေပူမယ်၊ ညနေ ဘက်ဆို ပရိတ်သတ် ထမင်း ဆာမယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော် တို့နေပူထဲမှာ ထမင်း ငတ်နေတာ ၁၉ နှစ် ရှိနေပါပြီ။
ဒီစာတမ်းလေး ကို ၁၈.၈.၂၀၀၇ မှာ ကျနော်ရေးခဲ့တာပါ။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Sunday, October 21, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (2)
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Wednesday, October 17, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (0)
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ ဘလော့ အုံနာကြီး ရွှေဘိုသားတစ်ယောက် ဘာစိတ်ကူးတွေ ပေါက်နေတယ် မသိပါဘူးဗျာ။ သူဘလော့ သူလည်လှဲ့ မကြည်နိုင်၊ စာလည်းမရေးနိုင် နဲ့တစ်နေ့ တစ်နေ့NTUC သွားလိုက်၊ ပြန်ရောက်လာလိုက်၊ မီးဖိုထဲ ဝင်လိုက်နဲ့တော်တော်ကို ကြာနေပြီ။ အချိန်ရှိတိုင်း လဲ မုတ်ဆိတ်ငုတ်စိလေး ပွတ်ခါပွတ်ခါနဲ့ ။ မာဆိုးတို့ ၊ မိုးထက်နေတို့ကို လဲ ဘလော့မှာ ပိုစ့်ရေးဖို့ပြောတာက လွဲပြီး ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဗျ။ မိုးထက်နေ ဆိုတဲ့ကောင် ကလဲ ခုပဲပါတီထောင်တော့ မလို၊ ခဏနေ ရင်ပဲတောခို တော့မလိုနဲ့ကျနော်လူလိမ်မာ မောင်မာဆိုး လေးပဲ သူတို့ မျက်နှာ ကြည့်ပြီး သူတို့ ခိုင်းတာလုပ်ပေးနေ ရတာပေါ့ ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး စုစုပေါင်း မှလူကလေး ၃ ယောက်ဗျာ နှစ်ယောက်ကထင်ရာ လုပ် နေတာ တစ်ရက်လဲ မဟုတ် နှစ်ရက်လဲမဟုတ် ဆိုတော့ ရင်ထဲကလိကလိနဲ့ ပေါဗျာ။ ဓာတ်ဆင်ဓာတ်ရိုက်များ လုပ်နေသလား။ တကယ်ပဲ မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ဝင်ပြီးတော်လှန်ရေး လုပ်တော့ မလား ဆိုပြီး သူတို့ကို လေးစားတဲ့မျက်လုံး နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာလဲမောလှပြီ။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့ တော့ သုံးယောက်စုံ နေတုန်း အွန်လိုင်းမှာလဲ သူတို့ ကောင်မလေးတွေ မရှိတုန်း၊ သူတို့ မေးစိ သူတို့ပွတ်နေတဲ့ အချိန်မဟုတ်တုန်း နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတော့ မေးလိုက်တာပေါ့ ဗျာ။ ဘာလုပ်နေတာလဲ ပြောပြပါဦးပေါ့။ မိုးထက်နေ ကတော့ ဘာမှမပြောပဲ ရှုတည်တည်နဲ့ပြန်စိုက်ကြည်ရောဗျ။ သူတို့ နဲ့ က ကျောင်းမှာ ကတည်းက မကောင်းအတူ ကောင်းအတူ (မကောင်းတာတွေ ပိုများမယ်ထင်ပါတယ်) ပေါင်းလာတဲ့ လူတွေဆိုတော့သိလိုက်ပါတယ်။ မိုးထက်နေ ဘာမှ လုပ်မနေဘူးဆိုတာ။ သူကအဲလို ပဲ ရှုတည်တည်ပြန်ကြည့်ရင် သူစိတ်နဲ့ သူ့ကို မကတ်ဘူး ဆိုတာ ဒီကကောင် ကသိပြီးသာဗျ။ ထပ်မေးရင်လဲ ဟိုတို့ စိဒီတို့ စိ ဖတ်ထား တဲ့ စာလေးတွေ ကို မရှိတဲ့မျက်မှောင် ကို ကျုံ့ ကျုံ့ ပြီး လက်ချာပေးတော့မှာ။ သူ့ကောင်မလေး အွန်လိုင်းတက်မလာ မချင်းဆိုပါတော့။ ရွှေဘိုသားကတော့ မရှိတဲ့ ရင်အုံကြီ ကို မောက်နေအောင် အသက်ရှုထဲ့လိုက်တယ်။ ပြီတော့ မွေးထည်းက ခုမှ စချဖြစ်တဲ့ သက်ပြင်းလို တော်တော်ရှည်လျားလေးလံ တဲ့ သက်ပျင်းချလိုက်ရော။ သေချာပြီ ရွှေဘိုသား အရေးတကြီး တစ်ခုခုပြောတော့မယ်ဆိုတာ။ (ပိုလေးနက်အောင်ထင်တာပဲ သက်ပြင်းကို သုံးခါတိတိချတယ် ခင်ဗျာ) မိုးထက်နေ တောင် ရွှေဘိုသားကို လေးစားတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည်လို့ ။
“ကိတ်မုန့် ဖုတ်နေတာ” ရွှေဘိုသား က တကယ်ကို လေးနက်တည်ကြည်တဲ့ အသံနဲ့ ပြော ချလိုက်တာပါ။ ကျနော် နဲ့ မိုးထက်နေ လည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်းတောင် မသိလောက်အောင် ငြိမ်ကျသွား တာပေါ့။ ခဏနေ မှ မိုးထက်နေ က စကားစပြောရော
“ခင်ဗျား ဘာလုပ်မဖို့ဒီလို အချိန်ကြီး ကိတ်မုန့် ဖုတ်နေတာတုန်းဗျ ၊ ဘယ်လိုကိတ်မုန့် မျိုး ဖုတ်နေတာမို့ ဒီလောက် အချိန်တွေ သုံးနေရတာတုန်း”
မိုးထက်နေမေး မှ ကျနော်လည်း စဉ်းစားမိတော့တယ်။ ပါဆယ်ဗုံးတို့ ဘာတို့ လို မျိုး ကိတ်မုန် ဗုံးတို့ ဘာတို့ များ တီထွင်နေသလားပေါ့ လေ။
ရွှေဘို။ ။ “ဘယ်လို ကိတ်မုန့် တုန်း ဆိုတော့လူစားတဲ့ ကိတ်မုန့် ပေါ့ ကွ၊ ဘယ်လို ဖုတ်တာတုန် ဆိုတော့ ပထမ ဆုံး ကိတ်မုန့် ထဲဘာတွေ ပါလဲ တွေးကြည်တယ်ကွာ၊ ဘယ်လို ပစ္စည်းတွေ သုံးတုန်းပေါ့။ ပြီတော့ အဲဒါတွေဝယ်တယ် ကွာ ပြီတော့ ဖုတ်တယ်”
မိုးထက်။ ။ “ခင်ဗျား မုန့် လုပ်နည်း စာအုပ်လေးဘာလေး ဝယ်ဖတ်ပြီးမှ လုပ်ပါလား”
မာဆိုး ။ ၊ “Google ကရှာကြည့်ရင်လဲ ရမယ်ထင်တယ် ”
ရွှေဘို။ ။ “အဲဒါတွေ တော့ ခင်ဗျားတို့ ပြောမှလားဗျ၊ ကျုပ်လဲသိတာပေါ့ ကိုယ်တိုင်တွေး ပြီးလုပ်ချင်လို့ ၊ ဘယ်သူ့ ဆီက နည်းနဲ့ မှ မလုပ်ချင်လို့ ပေါ့ဗျ၊ ကျုပ်က ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ့်ပုံစံ နဲ့ကို ပဲလုပ်ချင်တာ ခင်ဗျားတို့ လဲ သိရဲ့ သားနဲ့”
မိုးထက်။ ။”မဟုတ်ဘူးလေ ဗျာ အချိန်ကုန်သက်သာတာပေါ့။ စာအုပ်ထဲ က အတိုင်းလုပ်ရ မယ် ပြောနေတာမှ မဟုတ်တာ၊ နည်းနာလောက် ယူ၊ ပြီတော့ ခင်ဗျားလို ချင်တဲ့ ပုံစံပြင်ယူ ရင်လဲ ရတာပဲကို ”
မာဆိုး။ ။ “ဟုတ်တယ်လေ အရင်ဆုံး စားလို့ ရမဲ့ ကိတ်မုန့် လေ်း ဖြစ်အောင်အရင် လုပ်ပေါ့ ”
မိုးထက်။ ။”ကျနော် ကြားဖူးတာတော့ မုန့် ဖုတ်တယ်ဆိုတာ မီးပေးတာလဲ တော်တော်အရေး ကြီးဆိုပဲ”
ရွှေဘို။ ။”မီးပေးတာလား၊ ကျနော် Oven နဲ့ လဲ ဖုတ်တယ်၊ မီဖိုသုံး ပြီးလဲ ဖုတ်တယ်လေ”
မိုးထက်။ ။”အခြေအနေကရော ဘယ်လိုလဲ”
ရွှေဘို။ ။”အင်း ကောင်းတာပဲ၊ ….တဖြည်းဖြည်းလဲပို ကောင်းလာပါတယ်”
မိုးထက်။ ။”မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ ခင်ဗျားဟာက၊ ရမ်းသမ်းပန်းသမ်း ရှောက်လုပ်နေတာ ပဲဗျ၊ တကယ်ကောင်းကောင်း စားချင်ရင် သေသေချာချာ လေ့လာပြီးမှ လုပ်ပေါ့ဗျ၊ ကောင်းကောင်းလဲ စားရတယ်၊ အချိန်ကုန်လဲသက်သာတာပေါ့၊”
မာဆိုး။ ။”ဒါနဲ့ ခင်ဗျား ကိတ်မုန့် လုပ်နေတာ ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ”
ရွှေဘို။ ။”တစ်လလောက်တော့ ရှိပြီဟ။ ကျုပ်ဘာသာကျုပ် စဉ်းစားလို့ ရလောက်နည်း ပေါင်းစုံ နဲ့လုပ်နေတာပဲ။ တချို့ နည်းတွေ ဆိုနှစ်ခါသုံးခါလောက် ရှိပြီ”
မိုးထက်။ ။”ထပ်စမ်းတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် မေ့ပြီးမအောင်မြင်တဲ့ နည်း အတိုင်းပြန်စမ်းမိ တာလား”
ရွှေဘို။ ။”မှတ်ကို မထားတာ။ ထပ်စမ်းတာလား၊ နည်းအသစ်လားကို မသိတာ၊ လုပ်ရင်းနဲ့ မှ လုပ်ဖူးပြီးသာမှန်း သိတာဗျ”
မာဆိုး။ ။”ခင်ဗျား ကလဲ လုပ်တာလဲဒီလောက်ကြာပြီ၊ အမယ် သိပ်များတာလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ ၊ စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ သေချာမှတ်လုပ်ရင်တောင် ဒီအချိန်ဆို ပြီးပြီ၊ Decision Table မသင်ဘူး တာလဲမဟုတ်ဘူး”
ရွှေဘို။ ။”ခင်ဗျား တို့ နှစ်ယောက်လုံး သူများလုပ်နေတဲ့ ကိစ္စကို အကောင်းလဲမမြင်ဘူး၊ ကူလဲ ကူညီပေးတာမဟုတ်ပဲ၊ ဘေးကနေ ရှောက်ဝေဖန်နေတာပဲ”
မိုးထက်။ ။”ခင်ဗျားလုပ်တာနည်းလမ်း မကျလို့ ပြောတာဗျ”
ရွှေဘို။ ။”ကျုပ်ဘာသာကျုပ် လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်ဗျာ၊ ဘာမှမပြောနဲ့ တော့”
စကားဝိုင်း ကနေ လက်ဝှေ့ ပွဲ ဖြစ်ခါနီးမှာပဲ ရွှေဘိုသားကောင်မလေး နားကဖုန်းခေါ်တာနဲ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ပြီးသွာတယ်ဆိုပါတော့။ ဒါပေမဲ့ မာဆိုး ကတော့ သူများကို မစပ်စုရရင် အိပ်မပျော်တဲ့ ဗီဇလေးကြောင့် ရွှေဘိုသား နဲ့ သူကောင်မလေး ဘာပြောနေတုန်း နားထောင် နေ မိသေးတယ်။ ကောင်မလေး ဘာတွေပြောနေတယ် တော့မသိဘူး။ ကျနော်တို့ဇာတ်လိုက် ကတော့ ကိတ်မုန့် တရားဟောနေတော့တာပဲ။ တကယ်ယုံယုံ ကြည်ကြည် ဟောနေတာလား သူဘာသာ ယုံတယ်ထင်ပြီးပြောနေတာလား တော့မသိဘူးဗျ။ တော်တော် တော့ အာဘောင်အာရင်းသန်သန်ပဲ။ ပုံစံကြည့်ရတာကို က အရပ်ပုပုနဲ့နအဖ သတင်းစာ ဗီလိန်နဲ့ ချွတ်စွတ်ဗျာ။ စိန်စီသောည သာပြန်ကြည့် ရွှေဘိုသား ရဲ့ ဟန်က အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီအတိုင်း ကွက်တိပဲ။
နောက်ပိုင်းတော့ ကျနော့မှာ အလုပ်တစ်ခုတိုးလာပါရောလား။ ရွှေဘိုသားကို စောင့်စောင့် ကြည့်နေရတာ။ သိပ်ပေါ်တင်တော့လဲ မကြည်ရဲဘူး။ တော်ကြာစိတ်တို ပြီး အိမ်ပေါ်ကနှင်ချ ရင် နေစရာပျောက်နေ မှာကကြောက်ရသေးတယ်။ မိုးထက်နေ နဲ့ ရွှေဘိုသား လဲ အဲဒီကိစ္စ ဖြစ်ပြီးကတည်း က တစ်အိမ်ထဲ နေပြီးပြောစရာကို Gtalk ကတဆင့်ပြောတော့တယ်ဗျာ။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျနော် သတိထားမိသလောက် ဒီရက်ပိုင်းတွေ မှာ ရွှေဘိုသား က သူနဲ့ တွေ့သမျှလူကို အာဘောင်အာရင်း သန်သန်နဲ့ ကိတ်မုန့် တရားပဲဟောနေတော့တာ။ နောက် သူအားတဲ့ အချိန်တိုင်းလဲ မီးဖိုချောင်ထဲ မှာ တစ်ယောက်ထဲ မုန့် ဖုတ်နေတော့တာဗျ။ မုန့် ဖုတ် နေတဲ့ အချိန် သူမျက်နှာကို ကြည့်တော့ကျလဲ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေပျောက်နေပြန်ရော။ အိပ်မက်ယောင်ပြီး လုပ်နေတဲ့ လူရဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ဗျ။ ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်။ ဘာမှကို နားလည်လို့ မရတော့ဘူး။
အဲလို နဲ့မနေ့ ကတော့ ကျနော်တို့ အားလုံးရော ရွှေဘိုသားရဲ့ ကောင်မလေးရော ဆုံတဲ့ အချိန် ရွှေဘိုသား မုန့် ဖုတ်ပါလေရောလားဗျာ။ ပြီးလဲပြီးရော သူ့ ရဲ့ တော်တော်လေး ကို ကိတ်မုန့်နဲ့ မတူတဲ့ ကိတ်မုန့် ကို လူကုန်လိုက်ကျွေး တယ်။ မိုးထက်နေ ကတော့ ထုံးစံ အတိုင်းရွှေ ပျောက်တာလိုလို အတိတ်မေ့တာလိုလို ပုံစံနဲ့မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတယ်။ ကျနော် ကလည်း ဗိုက်မကောင်း လို့ဆော်ဒါပါတဲ့ အစာမစားရဲ ဘူးလို့လိမ်လိုက်ရော။ သူ့ ကောင်မလေး မျက်နေပေး ကလဲ သေသော်မှတည့်အော်ကောင်း၏ မျက်နှာပေးနဲ့ ။ သူလဲ မစားဘူး ဗျ။ ရွှေဘိုးသား က လည်းအေးဆေးပါပဲ။ ဘယ်သူမှ မစားရင်သူစားမယ် လို့ ပြောပြီ မီးခြစ်ဆံခေါင်း ၅ ခေါင်းစာလောက် စားလိုက်တယ်ထင်တာပဲ။ သူမျက်နှာကြည့်ရတာတော့ တစ်ယောက်ယောက် က သူနောက်က မစားရင်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုပြီး သေနပ်နဲ့ ချိန်ထားသလို ပဲ။ စားပြီးတာနဲ့ ပါးစပ်ကတော့ တော်တော်ကောင်းလာ ပြီတဲ့။ စာရွတ်သံနဲ့ ရွတ်တာနော်။
ခင်ဗျားတို့ ပဲ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ ဘယ်သူမှလဲ မစားဘူး။ သူကိုတိုင်လဲ မစားဘူး။ သေချာလဲ ကြိုးကြိုးစားစား စနစ်တကျလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူအချိန်အားတိုင်းတော့ မုန့် ဖုတ်
တာကို တကယ့်အလုပ်တစ်ခုလို လုပ်နေတာပဲ။ အဲလို နဲ့ ညနေသာရောက်သွား တယ် ကိတ်မုန့် က မီးခြစ်ဆံ ၅ ခေါင်းစာထက်ပိုမရော့သွားဘူး။
ညနေစောင်းတော့ ကျနော်လဲ ကျနော့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တွေဖို့ ထွက်လာခဲ့ရောဗျာ။ စိတ်ထဲကတော့ ကလိကလိနဲ့ ပေါ့ ။ ဒါနဲ့ ပဲ သူငယ်ချင်းကို ဖြစ်ကြောင်းရယ်ကုန်စင် ပြောပြမိ ရော။ ကြုံလို့ ပြောရပါဦးမယ်။ မာဆိုး သာ ခပ်တုံးတုံး၊ ခပ်ဖျင်းဖျင်းရယ်။ မာဆိုး က သူငယ်ချင်း ရတော့တော်တော်ကံကောင်း တာ။ သူနေရာနဲ့ သူလူတော်တွေ ချည်းပဲ။ နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရရင် မာဆိုး ကောင်မလေး တောင် မာဆိုးထက် အပြန်တစ်ရာ သာတယ်။ ခုသူငယ်ချင်းက လည်း အနုပညာတော်တော်ကောင်းတဲ့ လူဗျ။ မာဆိုး သာ ရက်ပေါင်းများ စွာနားမလည်တာ။ သူအတွက်တော့ ချက်ချင်း အဖြေထွက်တယ်။ မေးခွန်းတစ် ခုပဲ မေးခိုင်းတယ်။ ရွှေဘိုသား ပြန်ဖြေမဲ့ အဖြေလဲပြောတယ်။ အနုပညာ ခံစားနိုင်တဲ့ စိတ်အား ကောင်းလို့ တဲ့။
ကျနော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရွှေဘိုသား ကို ကံကောင်းစွာ ပဲတွေ့ တယ်။ ပြီးတော့ သူ စိတ်ကြည်နေပုံလဲပေါက်တာကို။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လဲ အိပ်ပေါ်ကတော့ နှင်မချလောက်ဘူး ဆိုပြီ သူငယ်ချင် မေးခိုင်းတဲ့ အတိုင်း အရဲစွန့့်မေးလိုက်တယ်။
“ခင်ဗျား ဒီလောက်အချိန်တွေ ငွေတွေ အကုန်ခံပြီး ဘာလို့ သေသေချာချာ ဖြစ်အောင်မလုပ် တာလဲ ”
“ကိတ်မုန့် ဖုတ်လို့ အောင်မြင်သွားရင် ကျနော် ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ၊ နောက်ထပ်လုပ်စရာ ထပ်ရှာနေ ရမှာပေါ့”
ဟုတ်ပဗျာ။ ကျနော့ သူငယ်ချင်း ပြောလိုက်တဲ့ ရွှေဘိုသာ ပြန်ဖြေမဲ့ အဖြေနဲ့ စကားလုံးသာကွဲ တာ။ အဓိပ္ပါယ် က နည်းနည်းမှကို မလွဲဘူး။ ရွှေဘိုသား ဘာဖြစ်နေတာတုန်း သိကြလားဗျ။ သိချင်လဲသိနေ ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ဆရာကြီးလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်လေးအရ ဇွတ်ပြောပြမှာပဲ။ သူ မုန့် မဖုတ် ခင် အချိန်တုန်းက အမျိုးသား ညီလာခံ နဲ့ လမ်းပြမြေပုံ ကို သုံးသပ်ချက် စာတမ်းရေးဖို့အသေးစိတ်လေ့လာနေတာဗျ။ သူ့က ခံစားမှုအားကောင်တဲ့ လူဆိုတော့ မသိစိတ် ကနေ Performance Arts လုပ်တာပါတဲ့ ခင်ဗျာ။ မှန်ရင်အဲဒါ ကျနော်ကိုချီးမွမ်း မှားရင်တော့ ကျနော့သူငယ်ချင်းကို သာ အားရပါးရ ဆဲကြပါတော့။ ဟုတ်တော့ လဲ ဟုတ်တယ်လေ ဗျာ။ ကောင်းလည်းမကောင်း ဘူး။ ဘယ်သူမှလဲ မကြိုက်ဘူး။ လုပ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်က နည်းလမ်း မှားနေတာလဲသိတယ်။ နည်းမှန်လမ်းမှန် ဖြစ်လာဖို့ လဲ သေချာမကြိုးစားဘူ။ ဒါပေမဲ အချိန်ကုန် ခံ ငွေကုန်ခံ ပြီးလုပ်နေတာပဲ မဟုတ်လား။
ရွှေဘိုသား ပေးတဲ့ ကျောရိုးနဲ့ရွှေဘိုသားကို ပြန်ထိုးလိုက်ရတာပဲ။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Saturday, October 13, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (4)
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Wednesday, October 10, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ ကဗျာ / Comments: (0)
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Tuesday, October 9, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (0)
ဒီနေ့စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ ဆုံ ဖို့ကြေငြာချက် သည် အလွန်မှ ရိုးသားသော လှည့်ကွက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သန်းရွေဧ။် တောင်းဆိုချက်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မတွေ့ ဆုံ ခင်ကတည်းက အရှုံးပေးပြီးတွေ့ ရမည့် သဘော ဖြစ်နေပါသည်။သဘောမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မြန်မာပြည်ကို ဖျက်စီးနေသူ ဟု သဘောရပါသည်)အမှန်တော့ နိုင်ငံတကာနှင့် UN က ဖိအားပေးမှုအရမ်း များလာ ခြင်းကို ကုစားရန်သက်သက်သာသာ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ဖော်ဆောင်ရန် လုံးဝစိတ်ကူးမရှိပေ။(ကျွန်တော့်အားအဆိုးမြင်သူဟုမယူဆလိုက်ပါနှင့်။ စစ်အစိုးရ ဘယ်လို ယုတ်မာတတ်သည်၊အာဏာအား မည်မျှမက်မောသည်ကို ပြည်သူပြည်သားအားလုံး သိပြီးဖြစ်ပါသည်။)ယနေ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အတွင်းအပြင် ဖြစ်ပေါ်နေမှုဧ။် အကြောင်းအရင်း မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အာဏာမလွဲပေးသည်လွဲပေးသည် ကို အဓိက တောင်းဆိုနေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။စစ်အစိုးရဧ။်အုပ်ချုပ်မှု တစ်နည်း အာဏာကို သိမ်းပိုက် ထားမှု ၊ လူ့ အခွင့် အရေးများချိုးဖောက်မှု၊ ပြည်သူအများစု ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး မှုနှင့်ကျန်းမာရေး လူမှုရေး အဘက်ဘက်မှ နိမ့်ကျမှု ကြောင့်သာဖြစ်လာရပါသည်။ထိုအရေးအခင်းကို ၈၈ ကျောင်းသားများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးများက အစပြု ပြီး စက်တင်ဘာအရေးခင်း(ငြိမ်းချမ်းစွာ လူထုသဘောထားပြခြင်း) များ မှသက်သေပြခဲ့ ပါသည်။ပြည်သူများသည်စစ်အစိုးရဧ။် ပြော ခဲ့ သလို နားယောင်ပြီး မြှောက်ပေးတိုင်းလုပ် မည့်သူများမဟုတ်သည်ကို အားလုံးနားလည်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ဒီအချက်ကို ဖုံးကွယ်လိုသောစစ်အစိုးရသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဆွေးနွေးပါမည် ဟုလူထုကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခြင်းဖြစ်သည်။မိမိတို့ ပြည်သူများ နေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သန်းရွေ တွေ့ ဆုံ ချင် သည့် နိုင်ငံရေး ပြရုပ် တစ်ခုသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားကြဖို့အရေးကြီးပါသည်။လတ်တလော တော်လှန်ခဲ့ ပြီး အသက်ပေးခဲ့ ကြရသော ရဟန်သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ ပြည်သူများ တို့ ဧ။် ပန်းတိုင်ဖြစ်သော စစ်အစိုးရအမြစ်ပြတ်ရေး၊ အာဏာရှင်စနစ် လုံးဝပျက်သုဉ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး၊ အတုအယောင်အမျိုးသားညီလာခံချုပ်ငြိမ်းရေး တို့ ကို ဆက်လက် ဦးတည် တိုက်ပွဲ ၀င်ကြရဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
စစ်အစိုးရ ဘာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ ဖို့ ကြေငြာတာလဲ?
Mr Gambari, UN, USA , Asian, EU တို့ ဧ။် ဖိအားပေးမှု သက်သာရန်နှင့် အတူ အခြားအဓိက အချက်မှာပြည်တွင်း ဆန္ဓပြ ပြီး စစ်အစိုးရ အားလုံးဝဆန့် ကျင်နေခြင်း ကို ယာယီအားဖြင့်လမ်းလွဲပေးရန်သာဖြစ်ပါသည်။ တတ်နိုင်သမျှအချိန်ဆွဲပြီး ၄င်းတို့တစ်ဘက်သတ်ရေးဆွဲသည့် အခြေခံဥပဒေ နှင့်အလုပ်မဖြစ်တော့သည့် လမ်းညွန်မြေ ပုံ နေရာတွင် တွေ့ ဆုံဟန်ပြပြီး အစားထိုးလုပ်ဆောင်ပြမည်။ပြီးမှ မဖြစ်နိုင်သောတောင်းဆိုချက်များကို တောင်းဆိုသည် ဟူသော အချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးရေးသည်လည်း အရာမထင်ပဲ အာဏာကို ဆက်လက်ကိုင်ဆွဲဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ရန် ကြိုးစားနေဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဓပြမှုအပေါ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်ကို ဗျောင်လိမ်လျှက်ပင်ရှိသေးသည်။ ထို့ အပြင် Mr Gambari သည်လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင်မြန်မာပြည်သို့ ပြန် လာဦးမည်ဟု ပြည်သူနှင့် ကမ္ဘာ ကို ကြေငြာထားသည်။ မိမိတို့ ပြည်သူ များအနေဖြင့် ရင်ထဲက ခံစားချက်များ ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြပြီး စစ်အစိုးရဧ။် ချုဆီ ထဲ့ မှုအပေါ် အာရုံမစိုက်ပဲ ဆက်လက်ပြီး ရဲရဲ ၀င့်ဝင့် ချီတက်ပြီးလုပ်စရာ ရှိသည်များကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဓဖော်ပြ တိုက်ပွဲဝင်ကြရန်လို အပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား / အကြောင်းအရာကတော့ ကူးယူဖော်ပြချက် / Comments: (0)
အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။
မြန်မာပြည်သူများ အတော်များများတွင် စိတ်ဒဏ်ရာ ရသွားကြသည်။ အမာရွတ် ထင်စေနိုင်လောက်သည့် စိတ်အတွင်း ဒဏ်ရာမျိုး ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အစုအပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲများ၏ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များက သွေးမတိတ်သေး။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အစုအပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲများ၏ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များက သွေးစိမ်းရှင်ရှင်။ နောက်ထပ် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ ရစေခဲ့ပြန်သည်။ ဤတကြိမ်တွင်တော့ အတော် ကုစားရန် ခက်ပါလိမ့်မည်။ အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးတို့၊ ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတို့ ပြောနေကြသော်လည်း ဤတကြိမ်တွင်တော့ အစစ်အမှန် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းနိုင်ရန် အတော် အချိန်ယူကြရတော့မည် ဖြစ်သလို၊ ပျက်ပြားသွားပြီ ဖြစ်သော ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး အတွက်လည်း နိုင်ငံတခု၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတခု အနေဖြင့် အတော် ရုန်းကန်ကြိုးပမ်း ကြရပါဦးတော့မည်။
(Trauma) ဟု ဆေးပညာရပ်အားဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသော စိတ်တွင်းနာ၊ သို့မဟုတ် စိတ်ဒဏ်ရာသည် လူတဦးချင်းအဖို့ပင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်ဆိုင် ရုန်းကန်ကြရသော ပြဿနာ ဖြစ်ပါသည်။ လူတဦး၏ စိတ်တွင်း ဒဏ်ရာများ ကုသနိုင်ရေး အတွက်ပင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ပေးကြရသည်။ အချို့ ပညာရှင်များက ၇-နှစ်မှ ၁၅-နှစ်တိုင်တိုင် အချိန်ယူကြရသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုးက သူ၏ ကဗျာတပုဒ်တွင် မြန်မာပြည်၏ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ "ပြည်တွင်းနာ" ဟု သုံးနှုံးခဲ့ဖူးသည်ကို ကျနော် မှတ်မိနေပါသည်။ သူက ကပ်သဘော၊ အထွေထွေ အကျပ်အတည်း သဘောကို ပြောသည် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်၏ ယူဆချက်ကတော့ ဤ "ပြည်တွင်းနာ" ဟူသော စကားလုံးတွင်ပင် စိတ်ခံစားချက် သဘောများလည်း ပါဝင်နေသယောင် ထင်မှတ်မိပါတော့သည်။ လူတဦးချင်း၏ စိတ်ဒဏ်ရာများ ပေါင်းစည်းမိသောအခါ၊ ကပ်ဘေးဒုက္ခ၊ အကျပ်အတည်းများ၊ စစ်ကြီးများ၊ အဖျက်အဆီး ဘေးဆိုးကြီးများ ကြုံတွေ့ရသောအခါ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တခုလုံး စိတ် ဒဏ်ရာ ခံစားရတတ်ပါသည်။ ကျနော်ကတော့ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်း၊ ၂၀၀၇ သံဃာများ၏ ကံဆောင်ပွဲ ဖြိုခွင်း နှိမ်နင်းမှု များသည် ကျနော်တို့ လူမှုအဖွဲ့ကြီး တခုလုံးအတွက် တခုအပေါ် တခုဆင့်၍ စိတ်ဒဏ်ရာများ အနာဖေး မတက်နိုင်ခင်၊ နောက်ထပ် နာကျဉ် စေပြန်ခဲ့ပြီဟု မြင်နေမိပါတော့သည်။
ဤသို့ စိတ်ဒဏ်ရာ ရစေလောက်အောင် ကြုံရသော အခြေအနေမျိုးတွင် ထိုသူတဦး၏ လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်သော ကျနော်တို့၏ ယုံကြည်ထားချက်ကို အခြေခံ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စ၍ ဆွဲလှုပ် ခံလိုက်ရပါသည်။ တနည်းဆိုရသော် ယုံကြည် ထားသောအရာ ကိစ္စများလည်း ပြိုကွဲ ကြေမွ သွားရပါတော့သည်။ ထို့အပြင် စိတ်ဒဏ်ရာရလျှင် လူအများသည် ဤဒဏ်ရာ ပြေပျောက်စေကြောင်း အတွက် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် တုံ့ပြန် တတ်ကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - မိမိ စိတ်တွင်း ခံစားချက်ကို ဖြေသိမ့်နိုင်ရေးအတွက် အရက်သောက် ထွက်ပေါက် ရှာကြခြင်းများ၊ အိမ်ပြန်လာသောအခါ မိန်းမရိုက်၍ အိမ်တွင်း အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်မှုများ၊ အခြားနည်းပေါင်းစုံဖြင့် လွဲမှား မူမမှန်စွာ ဖြေရှင်း ကြသည်များလည်း တွေ့ရတတ်ပါသည်။ ဤ တုံ့ပြန်ပုံ လုပ်ငန်းမျိုးကို Coping mechanism ဟု ခေါ်ကြပါသည်။
နိုင်ငံအများတွင်လည်း ဤသို့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းကြီး တရပ်လုံး စိတ်ဒဏ်ရာ ရစေသော ဖြစ်ရပ်များ ကြုံခဲ့ကြရဖူးပါသည်။ ဥပမာ- အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဆိုလျှင် ပြည်တွင်းစစ်၏ သမိုင်းကြောင်းကို ပြော၍ မဆုံးသေးသကဲ့သို့၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ကို ကြုံခဲ့ရသော မျိုးဆက်များက ရန်-ငါ (အဖြူ သို့မဟုတ် အမဲ) စသည့် အတွေးများနှင့် စစ်အေး တိုက်ပွဲကို ဆက်ခဲ့ကြကြောင်းလည်း လေ့လာသူများက ဆိုကြပါသည်။ ထို့အပြင် စက်တင်ဘာ ၁၁ (September 11) သည် အမေရိကန် လူထု အများအတွက် စိတ်ဒဏ်ရာ အကြီးအကျယ် ရစေခဲ့သော ကိစ္စပင် ဖြစ်သည်။ ဤစက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ တုံ့ပြန်လာပုံ ဆိုးကျိုးများကို မိမိတို့ တွေ့ကြုံ ခံစားနေကြရပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် လူထုများ၏ အစွန်းရောက် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကို ပိုမို ပြင်းထန်စေသကဲ့သို့ အခြားသော လူမှု အခွင့်အရေး၊ စစ်၊ ကမ္ဘာ့ ဆက်ဆံရေး မျက်နှာစာများတွင် များစွာ အကျိုး သက်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။
အချို့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း စိတ်ဒဏ်ရာ ရစေသော ဖြစ်ရပ်များ ကြုံကြရဖူးပါသည်။ နာဇီများ၏ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဂျူးများကို လက်စတုန်း သုတ်သင်မှုသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်း တခုလုံးကို ထိခိုက် စေခဲ့သကဲ့သို့၊ ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူများ၏ နိုင်ငံမဲ့ တွန်းပို့ ခံရသော အခြေအနေ၊ ဒုက္ခ သံသရာများကလည်း လူမှု အဖွဲ့အစည်းကို ဝါးအစည်းပြေစေ သကဲ့သို့၊ တဖက်တွင်လည်း အစွန်းရောက် အယူအဆများ ထွက်ပေါ်လာစေပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများ အကြောင်း လေ့လာကြသူများက ထိုလူမှု အဖွဲ့အစည်း၏ ကောက်ယူ မွေးစားထားသော စိတ်ဒဏ်ရာ (chosen trauma) များ အကြောင်းကိုလည်း အကျယ်တဝင့် လေ့လာ ဖူးခဲ့ကြပါသည်။
ယခုတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြသော သံဃာများကို လမ်းမလယ်ခေါင် ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ် ချေမှုန်း နေပုံများကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြရသည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလ သံဃာများနှင့် ဆန္ဒပြ ပြည်သူများကို ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွဲချေမှုန်းမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်တင်ဘာ (၁၁) Burma September 11 ဟု တင်စားလျှင် မမှားနိုင်ပါ။ ထစ်ကနဲရှိ စစ်တပ် အားကိုး၊ လက်နက် အားကိုးဖြင့် ဖိနင်း ချေမှုန်းလိုသည့် အာဏာရှင်များ၏ ဒေါသ၊ အမျက် မာန်မာနများကို မြင်တွေ့လိုက်ကြရသည်။ ထို့အပြင် တဖက်သတ် ပြောဆို ဝါဒ ဖြန့်ချိနေမှုများ ကလည်း၊ ထပ်မံ စော်ကားသကဲ့သို့ ရှိနေစေသည်။ သံဃာများက ဆိုခဲ့သကဲ့သို့ မေတ္တာဓါတ် အားနည်းသည့် အပြုအမူများ၊ ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းမှုများ ကလည်း ဆက်လက် သည်းညည်း မခံနိုင်စရာ။ လူအများ၏ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု ဘာသာရေး အခြေခံကိုပါ ရိုက်ချိုး ကြေမွ စေသကဲ့သို့ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
သမိုင်းအရလည်း စိတ်နာကျည်းစရာများက အကြိမ်ကြိမ်၊ ၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦးကို ဖြိုခဲ့သည်။ ဦးသန့် အရေးအခင်းတွင် သွေးချောင်း စီးခဲ့ရသလို၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ် အလုပ်သမား ဆန္ဒပြပွဲများကိုလည်း ပစ်ခတ် ချေမှုန်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၇ သွေးချောင်း စီးရမှုများက မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်နေသည်။ ထိုထက်ပို၍ ဆိုးသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားသည့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကား၊ အလေးအမြတ် ထားသည့် လူမှု အဖွဲ့အစည်းဟု ဂုဏ်ယူနေကြဆဲ ရဟန်း သံဃာများနှင့် သာသနာကို အဆိုးဝါးဆုံး ဖျက်ဆီး ချေမှုန်းလိုက်မှုသည် လူအများအတွက် စိတ်ဒဏ်ရာကို ပို၍ နက်ရှိုင်း လာစေခဲ့တော့သည်။
သံဃာများ၏ ဆန္ဒပြပွဲများကို အကြမ်းဖက် ချေမှုန်းနေစဉ်တွင် ပြည်တွင်းမှ "သဲ" ဟူသော ကလေးမ တဦးနှင့် မိမိ ချက်တင် စကားပြောခွင့် ရနေခဲ့ပါသည်။ သူရော၊ ကျနော်ပါ စိတ်လှုပ်ရှား နေကြ၍ အတော်လည်း စိတ်ထိခိုက် နေကြရပါသည်။ "ပစ်နေပီ။ ပစ်နေပီ။ လုပ်ကြပါဦး" "သေကုန်ကြတော့မှာပဲ" တဖက် မြန်မာပြည်ဖက်မှ သူမ ရိုက်ပို့လိုက်သော စာသားများ ကျနော် ရရှိနေပါသည်။ သူမက ပြင်ပသို့ အဖြစ်အပျက်များကို တတ်နိုင်သမျှ သတင်း ပေးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးစား ကူညီနေသူသာ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိနှင့် ယခင်ကလည်း မရင်းနှီး၊ မကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါ။ "ပြောပေးကြပါဦး" "ကျမတို့လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး" သူမက အဖြစ်အပျက် အသေးစိတ်ကို ပေးပို့နေချိန်တွင် ခံစားချက်ကိုပါ ကျနော် ထဲထဲဝင်ဝင် မြင်နေရပါသည်။
ကျနော်လည်း မည်သို့မျှ မကူညီနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျနော့ကိုယ် ကျနော်လည်း ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းမှု အပြီး၊ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးအနီး ရင်ခွဲရုံရှိ သူငယ်ချင်း အလောင်းနားတွင် နံရံကိုထု၊ မျက်ရည်တွေကျ ငိုယိုနေသော လူငယ်လေး တယောက်ကို ပြန်မြင်ယောင် နေပါသည်။ ထိုသို့ ငိုယိုနေခဲ့သူ လူငယ်ကလေးမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတော့ ငိုယိုနေသူ ကလေးမ တဦး၏ အဖြစ်ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် နောက်ထပ် မြင်တွေ့နေရပါတော့သည်။
ကျနော်တို့၏ စိတ်ဒဏ်ရာများက ပို၍ပို၍ နက်ရှိုင်း လာစေပါသည်။ ကျနော် တယောက်ထဲ မဟုတ်။ ကျနော်တို့ လူမှု အသိုင်း အဝိုင်းကြီးရော၊ နောက်ထပ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များပါ ထပ်၍ စိတ်ဒဏ်ရာ သင့်ရပြန်ပါပြီ။ ဘယ်တော့များမှ ပြီးနိုင်တော့ မည်နည်း။ မည်သည့်အခါမှ ကျေပျောက် နိုင်ကြပါတော့မည်နည်း။ မျိုးဆက်များ ဆင့်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရကတော့ လူအနည်းစုကလေး၏ အုံကြွမှု၊ ကောက်ရိုးမီးသဖွယ် ပုံဖော်နေပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို တွေ့မည်ဟု အပေါ်စီး မက်လုံး ပေးရုံလောက်ဖြင့် ငြိမ်းအေးသွားတော့မည့် ကိစ္စဟု ထင်နေပုံရပါသည်။ လူမှု အဖွဲ့အစည်း အတွင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သော စိတ်ဒဏ်ရာ အတွင်းကြေကို ဤမျှလောက်ဖြင့် ကျေပျက်စေလိမ့်မည် မဟုတ် ပါ။ ကျနော်တို့၏ ယုံကြည်မှု အခြေခံ တခုလုံး ကိုင်လှုပ် ခံလိုက်ရသော အခြေအနေ၊ ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေး မျှော်စင်ကြီး ပြိုကျခဲ့ သလို အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုများ ပြိုကွဲ မြေပေါ် ပုံကျသွားရသည့် အခြေအနေကို ကျနော် မြင်နေရပါသည်။ ဤစိတ်ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များဖြင့် ကျနော်တို့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းကြီးက ကာလအတန်ကြာ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်း နေကြရဦးတော့မည် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဆရာကိုအောင်သူငြိမ်း၏ဆောင်းပါးကို မဇ္ဖျိမသတင်းဌာန၀က်ဘ်ဆိုက်မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Monday, October 8, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (2)
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Thursday, October 4, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (3)
ရက်စပြူတင် ဆိုတာကို ကြားဖူးကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရုရှနောက်ဆုံး ဘုရင် ဇာနီကိုလပ် လက်ထက် ရုရှားနန်းတွင်းရေး မှာ သြဇာကြီးတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးပါ။ ဘုရင်နဲ့ မိဖုရား ကို တိုင် သူကို မလွန်ဆန်နိုင်ကြပါ ဘူး။ သူ့ကို ကိုးကွယ်ရတာ လဲတော်တော် ပျော်ဖို့ ကောင်းသ ကိုး။ အရက်သောက် နိုင်လေ ဘုရားသ္ခင်နဲ့နီးလေ။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းက နိုင်လေ ကောင်းကင်ဘုံ နဲ့ နီးလေ ဆိုတဲ့ ဘာသာရေး စည်းကမ်းတွေ နဲ့ တော်တော် တင်းကြပ်ပြင်းထန်တာ ကလား။ ကိုးကွယ် သူလဲတော်တော်ပေါ ဆိုပဲဗျ။ ကိုယ်တိုင်က ကြည်ညိုစရာကောင်းတာ ရော ဘုရင် နဲ့ မိဖုရား အပေါ် သြဇာငြောင်းတာရော နေမှာပေါ့ဗျာ။
သူ က ဘုရားသ္ခင် ရဲ့ အသွေးတော်ကို လဲ ရထားသူ လို့သူကို သူပြောထားသကို။ အဲဒီ ခေတ်ရုရှားနန်းတွင်း အသိုင်းအဝိုင်း မလဲ ဘုရားသားတော် သမီးတော် တွေရှိမပေါ့လေ။ သူဆီကတဆင့် ရတာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ လဲ ဝိုင်းသတ်လို့ သေတယ်ပြောတာပဲ။ သတ်တာတောင် တော်တော်ကို သတ်ယူရတယ်တဲ့။ အဆိပ်တွေ ကျွေး၊ မသေတော့ ဒုတ်နဲ့ ရိုက်၊ အဲဒါကို ထပ်မသေတော့ သေနပ်နဲ့ ပစ် ပြီး သူ အလောင်း ကို ကြိုးတုပ် ရေးခဲနေတဲ့ မြစ်ထဲပစ်ချမှ သေတယ်လို့ ဆိုတာကို။ သူအကြောင်း သေသေချာချာသိချင် ရင်တော့ အပင်ပန်းခံ ပြီလိုက်ရှာဖတ် နေဖို့ မလိုပါဘူး။ BoneyM အဖွဲ့ဆိုထားတဲ Rasputin ဆိုတဲ့ သီချင်းကို YouTube မှာရှာနားထောင်လိုက်ပါ။ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်ရပါလိမ့် မယ်။ သူရဲ့ ကြည်ညိုစရာ အကျင့်သီလ အကြောင်းတိုတို နဲ့ လိုရင်း ဂုဏ်ပြုသီ ဆိုသွားတာပါ။
အဲဒါက ထားပါတော့။ လူအထင်ကြီးခံရ မနည်းဘူးဆိုပြီး အာလူး ဖုတ်တာပါ။ ကျနော်ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ နိုင်ငံပိုင် အစိုးရမင်းများ ဆီမှာလဲ အဲလို ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် အနီးကပ် လမ်းပြပေးနေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း အားတက်စရာပြောချင်လို့ ပါ။ ကျနောတို့ရေမြေ့ သခင် ဂွစာသောင်းသောင်း သခင်ကြီး ကို အဟောချ သွာပုံလေး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကပို့ ပေး လို့ ခင်ဗျားတို့ လဲ နားထောင်ပါစေ ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ပါ။
မေတ္တာဓါတ် ပြည့်ဝပုံ တော့ ခု ကျနော်တို့ နိုင်ငံ ထဲက ပြဿနာတွေ ကို မြန်မြန်မဖြတ်လို့ တဲ့။ သိမ်မွေ့ တဲ့နည်းနာတွေ လမ်းပြသွားတာ။ အတိုက်အခံဆို ရန်သူဖြစ်လို့ ရန်ကိုအကြွင်းအကျန် မထားပါနဲ့ တဲ့။ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ နည်းနဲ့ ဖြတ်ပါ။ လွှနဲ့ ပြတ်ရင်လွှနဲ့ ဖြတ်၊ ဓားနဲ့ ပြတ်ရင် ဓားနဲ့ ဖြတ် ၊ပေါက်ဆိန်နဲ့ ပြတ်ရင် ပေါက်ဆိန်နဲ့ ဖြတ်၊ လက်သီးနဲ့ ပြတ်ရင်လက်သီး နဲ့ ဖြတ် ဆိုပဲဗျ။ ကျနော်တို့ တပ်မတော် ကလဲ နူးညံ့တဲ့ အမိန်တော် အတိုင်းပါပဲ။ နားထောင်ရှာပါတယ်။ သေနတ်ကလေး တွေ၊ မျက်ရည်ယို ဗုံးလေး တွေ တောင် အဆစ်ပေးလိုက်သေးတယ်။ အင်း ပေါ့ လေ တိုင်းမှူးကြီးနဲ့မီရထားဝန်ကြီးတောင် နာထောင်ရသေးတာပဲ။ စာနဲ့ ပေနဲ့ ကို ရေးပြော တာနော် ။ ခုခေတ်လူငယ် တွေ မှတ်ကြပါ။ ဇာတ်စာဆို တာ မကြားဖူးကြရင်ပေါ့။ “အောင်မြင် မှ ပန်းတိုင်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးတို့ လှမ်းကိုင်ရမှာသေချာသည်” ပါတဲ့ ခင်ဗျာ။
ပြည်တွင်းအား၊ ပြည်ပအား ၊ လူငယ်အား၊ လူကြီးအား ဘယ်လို ရှိတယ်ဆို တာ ကိုလည်း သူကသိနေတာကို ဗျ။ ပင်တဂွန်ကသာသိ ရင် ငွေအများကြီးပေး ခေါ်လောက်တယ်။ တို့နိုင်ငံ က အဖိုးတန်သူတော်စင် ကို လေ။ ရေးရင်းနဲ့ တောင်စိုးရိမ်လာ ပြီ။ ဘုရားသား၊ ကျောင်းသား၊ စစ်သား ကို လည်း မျက်စိထောက်ထောက် ကြည့်ရမယ် လို့ ပြောသွားတာကလား။ ဆိုလိုရင်းကတော့ သားသုံးသား ကို ဂရုစိုက် ရင် အောင်ရမည် ပေါ့ဗျာ။ မီးဆိုတာ မြန်မြန်သတ် မီးကြွင်းမီးကျန် မထားနဲ့ တဲ့။ အရန်မီးသတ် အဖွဲ့ နဲ့ လည်း နီးစပ်ပုံ ရပါတယ်။ ကျနော့ ခပ်တော်တော် ခေါင်းသုံး ပြီးတွေ ကြည်တာတော့ တကယ်လို့ များ သားသုံးသား ပေါင်းပြီး ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကို ဆော်တယ် ဆိုရင်တောင် သူနားမှာ လက်နက်ကောင်း ရှိတယ်ထင်ပါတယ်။ ဂါထာတို့ ဘာတို့နေမှာပေါ့ ဗျာ။ ပြောချင်ပြောမှာ ဗျ။ အသံဖမ်းတဲ့ လူက ညစ်ပြီး ထည့်မ ပေးတာရှိမှာ။ ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီးတို့ လည်း ပန်းတိုင်မြန်မြန် ကိုင်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပါတယ်လေ။
ပန်းတိုင် ကိုင်ဖို့ သိပ်ခက်နေလဲ ကျနော့ ဆီသာလာခဲ့ပါ။အားမငယ်ပါ နဲ့ ။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲတစ်ယောက် တစ်လှည့်စီကိုင် မယ်ဆို ရင် ကျနော် ကူညီမှာပေါ့။ အေးဗျာ ကျနော့ စိတ်ထင်တော့ ရက်စပြူတင် သေတာ တကယ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။
အင်မတန် မှာ ကြည်ညို ဖွယ်ရာ Rasputin ကိုတော်ကြီးပုံကို လဲ ကြည့်သွား ကြပါ ဦး ဗျာတို့ ။
ကိုရွှေဘို သားရေ အသံဖိုင်လေး တော့ ဝေပေးလိုက်ပါဦးဗျာ။ နားထောင်ချင်တဲ့ လူရှိရင်ပေါ့။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ကိုယ်တော်ကြီးကတော့ ဘယ်သူဆိုတာတော့ ကျနော်မသိပါဘူးခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား / အကြောင်းအရာကတော့ ကဗျာ / Comments: (0)
မိုးကို မျက်ရည်ပျံ့ စေတယ်
မိုး တကယ်ပြိုတော့မယ် ။ ။
ရေးသားသူ - လင်းအိမ်
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး / Comments: (1)
ကျနော် မနေ့ က ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ် က လင့်တစ်ခုကို ဝင်ကြည့်မိတယ်။ တော်တော် လေးကို ခံ စားလိုက်ရတာပါ။ ကျနော် တို့ နာဇီ ခေတ်ကို အရှင်လတ်လတ်များ ပြန်ရောက်သွားလား လို့ တောင် ထင်မိတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ "တပ်နဲ့ ပြည်သူ လက်တွဲကူ စိတ်တူကိုတူ အောင်ပွဲယူ " ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ ဘလော့တိုင်းမှာ ချိတ်လို့။ တကယ် ကို ကြေကွဲ စရာကောင်းပါတယ်။ ကျနော်သိသလောက် တော့ ဘယ် ဘလော့ ဘယ်သတင်း Site မှာ မှာ "UN ၊ US ပြည်သူ အောင်ပွဲ ယူလို့ " တင်လဲမတင်၊ ရေးလဲ မရေးကြပါဘူး။
၁၉၁၇ ရုရှားတော်လှန်ရေး မှာ စစ်တပ်တွေ လာရောက် ပူးပေါင်းတယ် ဆိုတာကို ကျနောတို့ နည်းနည်းသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။ အဲဒီ တုန်းကတိုင်းပြည်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အာဏာ က စစ်တပ်ရဲ့ လက်ထဲ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာဘုရင်နဲ့ သူဆွေမျိုးအသိုင်း အဝိုင်း ကွက်ကွက်လေးမှာ ပဲ ရှိတာပါ။ အဲဒီတော့ စစ်သားတွေ နဲ့ တော်လှန်ရေး သမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းတယ် ဆိုတာ မဆန်းပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဒီနေ့ တွေနေ ရတဲ့ အခြေအနေ က ၁၉၁၇ ရုရှာတော်လှန်ရေး ကာလနဲ့ညှိယူလို့ မရဘူးလို့ ကျနော်တော့ မြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ ပုံစံ က တကယ်ကို နာဇီခေတ်ပါ။ စစ်တပ်မှာ အာဏာအပြည့်ရှိတယ်။ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့် ရှိတဲ့အနေအထား ပါ။ တဘက်ကလဲ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က လူအများစု ကအတွေးအခေါ်တော်တော်ကို အားနည်းတာ ပါ။ နှစ်ပေါင်းလေး ဆယ်လောက်အတွေး အခေါ်ချုပ်နှောင်ခံထားရတာပါ။
နောက်ပြီး ကျနော်တို့ နိုင်ငံ စစ်တပ်ထဲ မှာ ရိုးရိုးတပ်သားတစ်ယောက် ရဲ့ ပညာအရည် အချင်းကလေးတန်းလောက်ပဲ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျနော် မှာ စာရင်းအတိ အကျမရှိပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတော်တော်ကို များပါတယ်။ နောက် တချက်က ဒီကနေ့ စစ်တပ်မှာ တိုက်စရာ မယ်မယ်ရရ ဘာမှ မရှိပဲ မြို့ ပြမှာ နေရတဲ့ အချိန်ကလို အပ်တာထက်ပို များနေပါတယ်။ နောက်ရဲနဲ့ တပ်၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး နဲ တပ်ရဲ့ဆက်ဆံ မှုတိုင်းမှာလဲ တပ်ကအပေါ်ဆီကပါ။
ရပ်ကွက်လူကြီးတစ်ယောက် က ရပ်ကွက်လုံခြုံရေး (သူတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခရီးစဉ်) ရှိတဲအခါ လာတဲ့တပ်က ရိုးရိုးတပ်သားကို တောင် အောက်ကြေးကနေ ဆက်ဆံရတာပါ။ ခုအခြေအနေ က ကျနော်တို့ လူထုမှာ ဆင်းရဲ သလို စစ်တပ်ကတပ်သားတွေလဲ ဆင်းရဲနေကြ တာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်သားဆို တာဘယ်တိုင်းပြည်က စစ်သားဖြစ်ဖြစ်ကို ဆင်းရဲမှုနဲ့ အသာကျပြီးသားပါ။ ပြီတော့ သူတို့အနေအထားနဲ့ လူကြီးလူကောင်း သာမန်လူတွေ အပေါ်ကို ဆရာလုပ်ဆက်ဆံနိုင် ခွင့် ရနေတာကို သူတို့ တော်တော်ကျေနပ်နေဟန်တူပါတယ်။ အဲဒီတော့ တော်ရုံအသိနဲ့ စစ်သားကလူ ထုနဲ ပူးပေါင်းဖို့ ဆိုတာ ကျနော့အမြင်အရတော့ ဖြစ်နိုင်ချေတော်တော်နည်းပါတယ်။တကယ်လို့ပူးပေါင်းလာတယ် ဆိုရင်တောင် လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောင်းပေးနိုင်မဲ့ အချိုးအဆမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ချင်း နှစ်ယောက်ချင်း ပဲဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျနော်အောက်မှာပေး ထားတဲ့လင့် ကလေးကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ ပစ်မိန့် ပေးလို့ ပစ်ရ ပါတယ် ဆိုတာထားပါတော့။ ခုဖမ်းမိပြီးသားလူတွေ ကို အကြောင်းမဲ့ ကန်ကြောက်ရိုက်နက်နေတာပါ။ မူးယစ်ဆေးသုံးထား တဲ့ပုံလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် ကို ရက်စက်တဲ့ စိတ် အရင်းခံနဲ့ လုပ်တာပါ။ ရိုက်ဖို့ အမိန့် ပေးတယ်လို့ ပြောရအောင်လဲ လုံးဝ ဖြစ်နိုင်ချေမဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက တပ်မ ၆၆ တံဆိပ်နဲ့ဗိုလ်ပြုံးနေပုံ ကလဲ တော်တော်ကို အံသြထိတ်လန့် စရာပါ။ နည်းတောင်နည်းသေးတယ် ဆိုတဲ့အပြုံးမျိုးပါ။ နောက်ဆုံးက လူငယ်လေး ဆို ကြုံတဲ့သူက ဝင်ရိုက်ကန်ကြောက်နေ တာပါ။ ကျနော် ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးသလောက် ဆိုရင် နာဇီတပ် တစ်တပ်မှာ အချင်းချင်းပြန်တိုက်တာ မတွေ့ ခဲ့ရပါဘူး။ မနိုင်တဲ့ အဆုံးမှ လက်နက်ချကြတာပါ။ ခု တပ်ကလဲ နာဇီစိတ်အပြည့်အဝ ရှိတဲ့တပ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
ဟစ်တလာက အမျိုးသားရေး စိတ် ပေါ်မှာ အမြတ်ထုတ်ပြီး ဂျာမန်တစ်တပ်လုံးကို နာဇီစိတ်သွင်းခဲ့တာပါ။ ခုကတော့ အမျိုးသာရေး စိတ် မဟုတ်ပဲ တပ်စိတ်သွင်းထားတာပါ။ တော်လှန်ရေးကို ရှေ့ ဆက်ဘယ်လို သွာမလဲ ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘလော့တွေကို ဝင်ကြည့်လိုက်မိတိုင်း ၊သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Gtalk Icon တွေမှာ့"တပ်နဲ့ ပြည်သူ လက်တွဲကူ စိတ်တူကိုတူ အောင်ပွဲယူ " ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုတွေ့ တိုင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ကျနော်တို့သံဃာတော်တွေ၊ ပြည်သူတွေ၊ လက်ရှိ အကျဉ်းချခံနေရ တဲ့ သံဃာတော်တွေ၊ ပြည်သူတွေ ကို ပြေးမြင်ပြီး အားနာနေမိတယ်ဗျာ။ တစိတ်ဗျာ အဲဒါလေးတွေ ဖြုတ်ထားလို့ မရဘူးလား။
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Tuesday, October 2, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ ကဗျာ / Comments: (1)
သူ့ လက်သည်းရာန့ဲ ရင်ဘတ်တွေ ချင်းချင်းနီလို့ 
ကျနော်တို့ မလဲ ခဲ့ပါဘူး
အလံ ကို အဆင့်ဆင့် ကမ်းခဲ့တယ်။
ဒီတစ်ခါသီချင်း က ရောင်စုံအလံနဲ့ စတယ်
ချိုးဖြူ ဝတ်ရုံနဲ့ ကမယ်
နတ်ဆိုး.. ခင်ဗျား လက်တွေကို
မကြာခင် နောက်ဆုံး စီးချင်းထိုးကြမယ်။ ။
ရေးသားသူ - မိုးထက်နေ
စင်ကာပူရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှ တိတ်ဆိတ်စွာ ပေါက်ကွဲမှုများ
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား / အကြောင်းအရာကတော့ ဓာတ်ပုံ / Comments: (0)
The place is just completely silent.
There is nothing making any sound.
The light of candles.
The feeling of peoples.
All is moving quietly and peacefully.
But you can feel deeply the sound of silent praying and hoping for the best.
ရွှေဘိုသားတစ်ယောက် ဒီနေ့ညနေမှာ မြန်မာသံရုံးရှေ့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လူတွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ အဲဒီတိတ်ဆိတ်မှုထဲမှာ ဗလောင်ဆူနေတဲ့ ခံစားချက်တွေ အပြည့်ပါရှိတဲ့ ရင်ဘတ်ထဲကလာနေတဲ့အသံတွေကို ရွှေဘိုသားရဲ့နားထဲမှာ ကြားနေရပါတယ်။ စင်ကာပူရောက်မြန်မာတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်အံထုတ်ဖော်ပြထားတာတွေကို ဖတ်ရှုရတာလည်း ကြေကွဲမှု၊ နာကျည်းမှု၊ ခံပြင်းမှု၊ အားမလိုအားမရဖြစ်မှုစတဲ့ ရနံ့ပေါင်းစုံကို ရှုရှိုက်ရသလို ခံစားရပါတယ်။
ဖယောင်းတိုင်မီးကလေးတွေကို ထွန်းညှိကြရင်း မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အပူမီးကို ကူညီခံစားနေကြတဲ့ စင်ကာပူရောက်မြန်မာတစ်စုပါ။ ယခု စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ၊ သံဃာတော်တွေနဲ့တကွ ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံးကို အာဇာနည်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမော်ကွန်းတင်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခသောကအပူမီးတွေငြိမ်းစေဖို့ ရွှေဘိုသားလည်း ဖယောင်တိုင်ထွန်းရင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်ဘလော့ကိုလာရာက်ကြည့်ရှုအားပေးသူတစ်ယောက်က ပေးသွားတာပါ။ သူ့နာမည်ကိုပြောမသွားတဲ့အတွက် မဖော်ပြနိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုချင်ရင်လည်း ဒီ http://img43.imagevenue.com/img.php?image=04198_capture_122_1080lo.jpg ကနေကြည်လို့ရပါတယ်။
Israel နိုင်ငံ ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏လှုပ်ရှားမှု
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Monday, October 1, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ သတင်း / Comments: (2)
Israel နိုင်ငံ Telaviv မြို့၁.၁၀.၂၀၀၇ နေ့မနက် ၉ နာရီ မှ စတင် ပြီး မြန်မာသံ ရုံးရှေ တွင် Israel နိုင်ငံ
ရောက်မြန်မာ နိုင်ငံသားများနှင့် Israel နိုင်ငံသားများ ပူးပေါင်းပါဝင် ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရ ဆန့် ကျင်
ရေး ဆန္ဒပြပွဲ ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မူလ အစီအစဉ် အရ တနေကုန် ဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပရန်ဖြစ်သော် လဲ
Israel နိုင်ငံ ဥပဒေအရ ဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပ ခွင့် မတောင်း ထားတဲ့ အတွက် နေလည်း ၁၁ နာရီ
ထိသာတိုက် ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Israel နိုင်ငံသားများ ပါဝင်မှုကလဲ အားရဖွယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ဆက် တွဲ သတင်းကောင်း တစ်ခု က အောက်တိုဘာ ၈.၁၀.၂၀၀၇ နေ.တွင် မနက် ၉ နာရီ မှာ
၁၁ နာရီ ထိ တရုပ်သံရုံးရှေ့ တွင် ဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပပါလိမ့်ဦးမယ်။ ထိုမှ တဆင့် ၄၅ မိနစ် ခရီး အကွာဝေး
ရှိ မြန်မာသံရုံး သို့ ခြေလျင်ချီတက် ဆန္ဒပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ လဲ စစ်အစိုးရ ရဲ
့ရက်စက်မှုမှတ် တမ်းတင် ပုံများကို ဝေငှသွာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညနေ ၃ နာရီထိ ဆန္ဒပြခွင့် ကို Israel
အစိုးရထံမှ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဖြစ်ပါတယ်။